၂ ပတ်အတွင်း ၈ ပေါင် ဝိတ်ကျသွားတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ အံ့ဖွယ်နည်းလမ်း – Aung Par Say
အိန္ဒိယကစားသမားကို ၂ ပွဲပြတ်ရှုံးပြီး ဒုတိယနဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ရတဲ့ သက်ထားသူဇာ
မမ မိုးယုစံကတော့ မောင်လေး စံလင်းထွန်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ သာ တွေ့ဆုံစေချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်
ဖခင် ရဲ့ အသက် ၅၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို အိမ်မှာကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး video file
ဇာတ်ပို့တစ်ယောက်အနေနဲ့ ငွေစုရတာခက်ခဲလို့ မုန့်ဟင်းခါးချက်ရောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ အေးသီတာ
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လူကြိုက်များခဲ့ရတဲ့ ရွှေထူးနဲ့ Tay Za MC တို့ရဲ့ “Shadow” MV
၂ ပတ်အတွင်း ၈ ပေါင် ဝိတ်ကျသွားတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ အံ့ဖွယ်နည်းလမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ခင်သဇင်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မျက်နှာချိုချို၊ ချစ်စဖွယ်အပြုံးနဲ့ အတူ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အဆီအပိုမရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင် မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးချောလေးကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါနော်…ဒါ့အပြင် သရုပ်ဆောင်ကစ်ကစ်နေမကောင်းဖြစ်တော့ ရောဂါစဖြစ်ကတည်းက ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေးကလည်း ခင်သဇင်ပါပဲ….
အဲဒီလို ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးပိုင်ဆိုင်လာအောင် ဘယ်လိုတွေတောင် ဝိတ်ချခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ခင်သဇင်ကိုယ်တိုင် သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ပြန်လည်ဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်…မမညီမလေးတွေလည်း ခင်သဇင့်လို ကိုယ်လုံးလှလှလေးပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ဝိတ်ချနည်းလေးအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်နော်…
ခင်သဇင်က ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်လေးရလာအောင် သဘာဝအတိုင်း ဝိတ်ချခဲ့တာပါတဲ့…. ၂ ပတ်အတွင်း ၈ ပေါင်တောင်ကျသွားတာတဲ့နော်….ခုလိုဝိတ်ကျအောင် ဘာ Diet ဘာဆေးမှ မစားပါဘူးတဲ့….GYM ဆော့တာလည်း မဟုတ်ရပါဘူးတဲ့…
ဒါပေမဲ့ ထမင်း၊ ပေါင်မုန့်၊ အသားတွေတော့ လုံးဝမစားတော့ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်…. အချိုရည်ကိုလည်း ရှောင်သလို ပဲ၊ ငါး၊ ရေ နဲ့ ပဲနို့ပဲ စားသောက်ပါတယ်တဲ့… ဆီကြော်တွေ၊ အချိုတွေ၊ ကော်ဖီတွေ Tea တွေကိုလည်း ရှောင်သလို နွားနို့ကိုတော့ သောက်ပါတယ်တဲ့….မျက်နှာဖောင်းနေတာတွေ မဖြစ်အောင်လည်း အငန်ရှောင်သလို ထမင်းဝိုင်းရောက်ရင်လည်း ဟင်းသာစားပါတယ်တဲ့ဗျာ… ဒါ့အပြင် စိတ်ဆင်းရဲ စရာတွေ မတွေးပဲ ပျော်ပျော်နေတယ် စာဖတ်တယ်…ဒီလိုနဲ့ ၂ ပတ်အတွင်း ၈ ပေါင် ထိ ကျသွားတာတဲ့ဗျာ…မလွယ်ဘူးနော် ၈ ပေါင်ကျအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာ….
ဒါကတော့ ခင်သဇင်ပြောထားတဲ့ ဝိတ်ချတဲ့ နည်းလမ်းလေးပေါ့…တခြား ဝိတ်ချတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပေမဲ့လည်း သဘာဝအတိုင်း ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး လုပ်စရာမလိုတဲ့ ခင်သဇင့်ရဲ့ နည်းလမ်းလေးကလည်း ဝိတ်ချချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါနော်…မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင့်အတွက်လည်း အားပေးစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ကြပါအုံး…
HW (နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ)/Khin Thazin
← ၀င်းနှင့်ဇော် တို့ သေဒဏ် မှလွတ်မြော က်ရေး လာမည့်အပ တ်မှစတ င်ကာ အသေးစိတ်ဆောင် ရွက်မည်
ထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်နေတဲ့ သူမရဲ့ အချစ်ရေးကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး →
ဒိန်းဒေါင်အရမ်းလိုချင်နေတဲ့ တန်ဖိုးကြီးအရာလေးတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ မြင့်မြတ်
September 21, 2019 azl
စီးပွားရေးကို ဦးစားပေးနေတာကြောင့် အနုပညာအလုပ်နဲ့ ဝေးကွာနေတဲ့ ဆန်းသစ်လ
နုပျိုရခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောလာတဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ
မဟာမုနိဘုရား အတွင်း မိုင်း၂လုံး တွေ့ရှိသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုခရီးစဉ် ရက်ရွေ့ဆိုင်
၂၀၁၉စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီချိန်၌ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားဝင်း အနီးရှိ စစ်ဘေးရှောင် မိသားစုများအား ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုမှ တွေ့ဆုံကာ စားသောက်ဖွယ်ရာများ စားနပ် ရိက္ခာတို့များ ထောက်ပံ့ရန်
မြန်မာပြည်အနှံ့ သွားလာကျက်စားပြီး မိန်းကလေးများကို လိမ်လည်ချိန်းတွေ့နေသူအား ဖမ်းမိ
သူ့သားလေး ပျောက်သွားလို့ ငိုပဲငိုနေတယ် အစ်ကိုရေfacebook ပေါ်တင်ပေးပြီး ကူညီခိုင်းနေလို့ပါ
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာ အွန်လိုင်းကနေ အလုပ်ရှာကြတဲ့ မိန်းကလေး (၅၀)ကျော် အလိုမတူပဲ သားမယားပြုကျင့်ခံရ
Copyright © 2019 Aung Par Say. All rights reserved.